आयो बिनाचाबी खुल्ने डिजिटल लक - E Net Nepal
Home Technology आयो बिनाचाबी खुल्ने डिजिटल लक
आयो बिनाचाबी खुल्ने डिजिटल लक
E NET NEPAL 10:00 PM Technology,
चाबी भुल्ने समस्याले दिक्क हुनुहुन्छ? उसोभए तपाईको लागि खुशीको खबर छ। प्रविधिले तपाईको ढोकालाई बिना चाबी नै खोल्न सकिने बनाएको छ। तर बिनाचाबी ढोका खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसंग स्मार्टफोन हुनुपर्नेछ र तपाईले डिजिटल ताल्चा प्रयोग गर्नु एकदमै जरुरि हुन्छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा अनुसन्धानकर्ताहरुको एउटा समुहले यस्तो प्रविधिको विकास गरेको छ जसलाई डिजिटल ताल्चाको उपमा दिईएको छ। तपाईले आफ्नो घरको ढोकामा एउटा खास किसिमको डिजिटल लक लगाउनु पर्नेछ र डिजिटल लकको कन्ट्रोल इकाईलाई आफ्नो घर अथवा अपार्टमेन्टको भित्रपट्टी जोड्नुपर्ने छ । जब तपाईले डिजिटल लक लगाउनुहुन्छ तब तपाईले कुनै एप डाउनलोड गर्नेबित्तिकै यसले काम गर्न थाल्छ। यदि ढोकामा इन्टरकम लगाइएको छ भने तपाईले त्यसमा एउटा सानो चिप जडान गर्नुपर्ने हुन्छ।
कसरि काम गर्छ त डिजिटल लकले
जब तपाई आफ्नो ढोकाको अगाडी जानुहुन्छ र फोनको बटन थिच्नुहुन्छ तब तपाईको फोनले तपाईको अपार्टमेन्ट वा घरमा राखिएको कन्ट्रोल युनिटलाई संदेश प्रबाह गर्छ। त्यहि संदेशको आधारमा तपाईको घर वा अपार्टमेन्टको ढोका खुल्छ।
टाढै बसेर पनि खोल्न सकिन्छ ताला
यदि तपाई घरमा हुनुहुन्न र घरमा कोहि पाहुना आएका छन् अब आत्तिनु पर्दैन तपाईले डिजिटल लकको सहाराबाट टाढै बसेर पनि ताला खोल्न र बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईको समय र पैसा दुवैको बचत हुन्छ।
फोन हरायो भने, चिन्ता गर्नु पर्दैन
तपाईलाई लाग्दै होला कि फोन चोरी भयो अथवा हरायो भने के हुन्छ? तर चिन्ता लिनु पर्दैन तल संग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तपाई पहिला नै सेभ गरिराख्न सक्नुहुन्छ जसको आधारमा तपाईले तालालाई सजिलै संग खोल्न सक्नुहुन्छ।
राख्ने हैन त डिजिटल लक? तपाई के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा हामीलाई सुझाब दिनुहोला......